Ala a kwadebere n'ụzọ kwesịrị ekwesị abụwo isi ihe dị mma maka owuwe ihe ubi dị mma. Ala tupu oge oyi ga-akwadebe site n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Esi kwadebe ala maka oyi?
E nwere ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa iji kwadebe ala maka oyi, nke mere na owuwe ihe ubi n'afọ na-esote afọ ojuju ya na mma ya. Ka anyị nyochaa iwu ndị bụ isi:
Ọhụrụ nri. Ọtụtụ mgbe, tupu frosts, ndị bi n'oge okpomọkụ na-agba ọsọ na-agbasa nri ọhụrụ na ala. Ma usoro a anaghị enye nsonaazụ ndị ị na-atụ anya ya. O yikarịrị ka usoro mmebi nke na-akpata ikuku oxygen agaghị amalite. N'ihi ya, mgbọrọgwụ ahụ mebiri emebi, nke na-eje ozi dị ka nsị maka pests dị iche iche.
Na oge mgbụsị akwụkwọ, uto nke osisi na-akwụsị , n'ihi ya, ọ dịghị mkpa ka ihe oriri dị ukwuu. Mgbe ị na-akwadebe ala maka oyi, a na-akwụsị nri ahụ kpamkpam. Uchu nile ga - aga na mmiri mmiri na mmiri di elu. Ozugbo owuwe ihe ubi, ị nwere ike kụrụ salad ubi, onye na-ahụ maka ndị Persian. Ọ ka mma ịkwado ala maka oyi n'oge a, ebe ọ bụ osisi ndị a na-emeziwanye usoro ya ma gbochie oke mmiri. Eziokwu ahụ bụ na mgbọrọgwụ okooko osisi ma ọ bụ agwa dị ka iji dozie nje bacteria. Ha na-enwe ike ikuku nitrogen site na mbara igwe. Ya mere, nri fatịlaịza na-enyere aka mee ka ala dịkwuo ala. Ndị a na-enyere aka ga-enwe ike ịrụ ọrụ ha nke ọma na mmiri tupu ị kụrụ.
Na-akwadebe ala maka ịkọ oyi. Ọ dị mkpa ichebe ala site na mmetụta nke ọnọdụ ihu igwe. Mgbe oké mmiri ozuzo gasịrị, ọ na-esikwu ike karị, nke na-eme ka njedebe nke ntule ala ghara idi. Ọ dị mkpa ịkwadebe ala maka mulching na oyi, n'ihi na nke a na-eme ka o kwe omume izere nsogbu n'ọdịnihu. Ncha, ahịhịa dara, nke na-ekpuchi ala, ire ere na ụdị humus. Nke a na - eme ka mmiri ghara ikpochapu mmiri, na - egbochi uto nke ahịhịa, na - akwalite ọrụ dị mkpa nke ndị bi na ala. Usoro ndị a niile anaghị ekwe ka ụwa daa, mee ka ọ dị ọcha, meziwanye ikuku.
Na-akwadebe ala maka igwu oyi. Ogologo oge gara aga, ndị ọkachamara bịara na nkwubi na nchịkọta mgbụsị akwụkwọ na-eduga ná nsogbu nke usoro ụlọ. Ihe kpatara ya bụ na ihe niile na-eme ala na-ahọrọ ala ndị dara ogbenye na oxygen, ya mere, ọ dị nnọọ mma igwu ubi naanị n'oge opupu ihe ubi. Na tupu oyiing na-atọghe ala na pitchforks. Ọchịchị a nwere naanị otu ihe: ụrọ ala.
Potulalk terry - na-eto eto nke osisi, ihe nzuzo nke ezi akuku
Ịkụpụta poteto site na nkà na ụzụ Dutch
Celery celery - na-eto site na osisi
Cultivation nke lavender
Na-achọ nlekọta kabeeji - na-eto eto nke osisi
Dicentra - kụrụ ma lekọta
Beagle - nkọwa nke ụdị, agwa
Kedu mgbe nkịta na-amalite na estrus?
Obere kalori na-esi na ihe ndi di mfe
Kedu otu esi ebufe nwa amuru n'ime ụgbọ ala?
Snow Queen etemeete
Kissel si gooseberries
Kpa maka ihe nchekwa mmiri
Echere steepụ n'ụlọ ụlọ
Ememe Afọ Ọhụrụ nke ụlọ obodo
Denim uwe akwa
Ogwe oche - ihe na-adọrọ mmasị na nhọrọ maka ime ime oge
Ịdọ aka ná ntị Kara Delevin pụtara na magazin magazin Britain bụ ELLE